» चर्चित नायिका सुनिता लुङ्वा गायिकाका रुपमा पनि चर्चा कमाउँदै
चर्चित नायिका सुनिता लुङ्वा गायिकाका रुपमा पनि चर्चा कमाउँदै
१९ असार २०७६, बिहीबार २२:२४
मकवानपुर, १९ असार । रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोताहुँदै तामाङ चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी चर्चित नायिका सुनिता लुङ्बाले आफुलाई गायिकाका रुपमा समेत अगाडि सारेकी छिन् । लुङ्बाले केही दिन अघि मात्रै आफ्नै आवाजमा नयाँ गीत समेत सार्वजनिक गरेकी छिन् । ‘गाउन मन लाग्यो मलाई’ बोलको उक्त गीतलाई श्रोता दर्शकले रुचाएका छन् । टिएफ च्यानल मार्फत उनको आवाजमा रहेको गीतको अडियो भर्सन सार्वजनिक गरिएको हो ।
गीतमा साङ्गे ब्लोनको शब्द र विश्व दोङको सँगीत रहेको छ । गीतलाई नोर्बु शेर्पाले एरेञ्ज गरेका छन् भने दिपेश प्रधानले मिक्सिङ गरेका छन् । सगु प्रोडक्सन स्टुडियोमा रेकर्डिङ गरिएको गीतलाई प्रयाश दोङले रेकर्ड गरेका हुन् । हेर्नुहोस् उनको गीत–
वि.सं. २०६७ साल देखि रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोताको रुपमा मिडियामा प्रवेश गरेका उनले धेरै स्टेज कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गर्दै आएकी छिन् । स्टेज तताउन खप्पिस उनले ‘जहाँ जान्छु उहीँ हुन्छ जात्रा मेरो जोबन खत्रा’ बोलको गीतबाट संगित बिधामा प्रवेश गरेका हुन् । गीत संगित चलचित्र र आरजे भिजेमा पनि पोख्त नायिका लुङ्बाले वि.सं. २०६९ सालमा पहिलो पटक निमा लामा तामाङको निर्देशनमा रहेको ‘छार केवा’ नामक चलचित्रबाट नायिकाको रुपमा डेब्यु गरेकी हुन् । उनले हाल सम्म थुप्रै गीतहरु पनि गाइसकेकी छिन् । नेपाली र तामाङ गरी दर्जनौ चलचित्रमा नायिकाका रुपमा अभिनय गरिसकेकी उनले तामाङ चलचित्र ‘म्लाङ प्वाँहार’को ‘नक्कली कान्छीला सक्कली सेम’ सेम बोलको गीतबाट थप चर्चा पाएकी थिईन् ।
बुबा सानुकाजी लामा र आमा सुन्तली तामाङको कोखबाट वि.सं. २०५१ साल चैत्र ९ गते काभ्रे जिल्लाको पाँचखल नगरपालिकामा उनको जन्म भएको हो ।